UMarina Dredging e-Fire Island Uqediwe ngu-Ellicott Dredge
UMarina Dredging e-Fire Island waphothulwa ngempumelelo nge-Ellicott dredge
Kuqediwe i-Hill Hill Marina
I-Fire Island National Seashore's Watch Hill marina manje isivulekile kulandela ukuphothula ngempumelelo uhlelo lokwehliswa kwesondlo.
"Ukwehliswa kabusha okuqediwe esiteshini se-Watch Hill kuzohlinzeka ngokuphepha okuphephile kwezikebhe, izinsizakalo eziphuthumayo, kanye nabagibeli besikebhe abazimele ngamahlobo amaningi ezayo"Kusho Umphathi weZikhungo Zezilwane Zomlilo Zase-Fire Island uJames Dunphy.
Izingxenye zesiteshi sokuhamba esiya e-Watch Hill - ezitholakala ngesikebhe sabagibeli, isikebhe sangasese, kanye nonyawo kuphela - zakhishwa kulobu busika obudlule ukuze kugcinwe ukufinyelela okuphephile, komphakathi kokuya emarina nasezikhungweni zokuma.
Okungaphezulu kwama-cubic egcekeni we-29,000 asuswe esiteshini naphezu kokubambezeleka kwesimo sezulu sasebusika. Iphrojekthi ye-dredge, exhaswa yiSiphepho uSandy isabelo, yaqala ngoZibandlela 2014 futhi yaqothuka kwaze kwaba maphakathi noMashi ngenxa yesimo sezulu sasebusika esibi neqhwa elikhulu eGreat South Bay.
Umnyango Wezemvelo Wokulondolozwa Kwezemvelo eNew York unikeze isandiso semvume ku-H & L Contracting ngoJanuwari 2015 ukwelula lo msebenzi ngaphambi komnqamulajuqu wokuqala kaJanuwari 15, 2015 nomsebenzi waphothulwa ngoMashi 31, 2015.
Umthombo Ukushiswa Namuhla